नेपाली, हिन्दी बोल्ने रोबर्ट नेपालमै बनाए बिजय रानाले, रोबर्ट संगै आफ्नै भाषा पनि बनाए ! (भिडियोसहित) – Etajakhabar
नेपाली, हिन्दी बोल्ने रोबर्ट नेपालमै बनाए बिजय रानाले, रोबर्ट संगै आफ्नै भाषा पनि बनाए ! (भिडियोसहित)
अघोरी बाबाको बिबाहबारे बिरोध गरेर एकाएक भाइरल बनेका जङ्गी बाबा र अघोर बाबाको झगडा भइरहेको बेला पन्ध्र बर्से बाल बैज्ञानिकले बनाएको नेपाली बोल्ने रोबर्ट र रोबर्टले पड्काउने ब म हेर्न अबलोकन गर्न र साना भाइलाई हौसला दिन भनेर बाबा झापा सुरुङ्गा पुगेका छन । रोबर्टले बाबालाई देख्ने बित्तिकै यो दारिवाला मान्छे को हो भनेर सोधेपछी बाबा अचम्ममा परे । दारिवाला भन्दै ब म प ड्काएपछि बाबाको सातो नै उड्यो । उता काठमाडौका अघोर बाबालाई खुल्ला चुनौती दिने जङ्गी बाबा अनि कसैसँग नटेर्ने अघोर बाबाको चर्काचर्की परिरहेको छ ।
यहि बेला किन पुगे त भाइरल बाबा रोबर्ट र बम बनाउने ठाउँमा ? अनि किन गर्‍यो त रोबर्टले बाबामाथी प्रहार ? । सल्यानमा जन्मिएका बिजय रानाले पन्ध्र बर्षको उमेरमै सबैलाई चकित बनाएका छन । धेरै आबिस्कार गरेका छन । कहिँ कतै तालिम अनि कसैबाट सिकेका छैनन । भनिन्छ बनको काडोलाई तिखार्नु नै पर्दैन भनेझै सानैदेखि रेडियो फुटाउदै भित्र के छ के बाट बनिएको छ भन्दै हेर्ने उनले आफै सिक्दै गए आबिस्कार गर्दै गए । सल्यानको बिकट गाउँमा जन्मिएका उनले सल्यानमै करिब दुई बर्ष अगाडी नै हेलिकप्टर बनाएर उडाएर निकै चर्चा कमाएका थिए । यति सानै उमेरमा उनले गरेको कामले सबैलाई अचम्मै पार्यो ।
एकाएक चर्चा कमाएका बिजयलाई झापाका बसन्त थपलिया दाइले झापा सुरुङा उनकै घरमा ल्याएर नयाँ नयाँ एकपछी अर्को आबिस्कार गराउदै छन । बम मिसाइल हावबाट चल्ने बिजुली साथै अन्य धेरै कुराहरु आबिस्कार गरेका बिजयले केही समय अगाडी पानीजहाज निर्माण गरेका थिए । करिब दस जना चड्न सकिने पानीजहाजको सफल परिक्षण गरिसकेपछी अहिले नेपालिमा बोल्ने दोहोरो कुराकानी गर्ने रोबर्ट बनाएका छन । रोबर्टले बोल्नेमात्र नभएर धेरै कुराहरु गर्छ । बाँकि तल भिडियोमा हेर्नुहोस :
Posted on: Tuesday, November 5, 2019 Time: 13:26:54
लकडाउनको उल्लंघन गर्दै दरबारमार्ग क्षेत्रका पसलहरु आजबाट खोलिने
अब लकडाउन खुकुलो हुने; यातायात, उद्दोग र निर्माण कार्य सञ्चालनसहित यस्तो बन्दैछ नयाँ मोडालिटी
काठमाण्डौ उपत्यकामा यी ठाउँमा राखिनेछ विदेशबाट फर्केका नेपाली नागरिकलाई !
असार १ देखि पढाइ सुरु हुने
अभिनेत्री मनिषा कोइराला परिवारसहित भारत छोडेर नेपाल आइन !
भारत छोडेर अभिनेत्री मनिषा कोइराला आजै आफ्नो परिवारसहित नेपाल आईन्
रुकुम जाजरकोट घटनाका बेपत्ता भएका १९ वर्षिय गोविन्द शाहीको शव भेटियो
रुकुम जाजरकोट घटनालाइ सरकारले बल्ल लियो कडा एक्सन, ह;त्या गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारको निर्देशन
-20197 second ago
लकडाउन खुलाउनु पर्ने भन्दै ब्यापारीहरु सडकमा, दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसाय आजबाट सुरु गर्दै !
-19377 second ago
-17931 second ago
-16199 second ago
-15048 second ago
-14250 second ago
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ज्येष्ठ २१ गते बुधबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भेरी नदीमा बेपत्ता भएका नवराजका साथी गोविन्द शाहीको शव घटनास्थलभन्दा करिब २० किलोमिटर टाढा फेला पर्यो !